Tag: zvemukati | Martech Zone
Kubva kushamwari, Bob Carlson, ku HealthX: Chidzidzo chisingachinji chekuti ma consultants angaite sei mutsauko kusangano. Vhiki rapfuura, takatora shamwari kuenda kuresitorendi nyowani, tikacherekedza kuti waiter uyo akatora odha yedu akatakura chipunu muhomwe yehembe yake. Zvaiita kunge zvisinganzwisisike. Apo mukomana webhazi paakaunza mvura yedu nemidziyo, ndakaona kuti aivewo nekapu muhomwe yehembe yake. Ipapo ndakaringa ringa kwakatarisa